Indwangu yesheke elikhulu le-viscose nge-spandex yabakhiqizi be-suit office nabaphakeli | I-Yun Ai
Ulapha: ekhaya - Imikhiqizo - Indwangu enkulu yokuhlola i-viscose nge-spandex ye-suit office
Ngaphandle kwalokho, sisekela umsebenzi omningi owenziwe ngezifiso, njenge-antistatic, ukukhishwa kwenhlabathi, ukumelana no-oyela, ukumelana namanzi, i-anti-UV… njll. Uma ufuna ukubona indwangu yangempela, singakuthumela amasampula (ukuthumela ngezindleko zakho), hlela ukupakisha ngamahora angama-24, isikhathi sokulethwa kungakapheli izinsuku eziyi-7-12.
Ukwakheka: I-65% T, 33% R, 2% SP
Isici: Nciphisa Ukumelana, Nweba
Into Cha: YA18397
Isisindo: 300 G / M.
Ukubala kwentambo: 32 * 32
Izindwangu ezenziwe nge-polyester, i-viscose ne-spandex fiber zinokunwebeka okuhle, ukumelana nemibimbi, ukugcinwa komumo, ukusebenza kahle kokuwasha nokugqoka nokuqina.
Ukutholakala komswakama kabusha kwe-polyester kuphansi, kumaphakathi kuka-0.2 kuya ku-0.8 wamaphesenti. Yize ama-polyesters engangeni, awunawo amandla okukhotha. Ekuqotheni, umswakama ungathwalwa ebusweni be-fiber ngaphandle kokumunca.
Ukuzizwa kwendwangu ka-Viscose kukwenza izingubo zibonakale zisezingeni eliphezulu, ngaphandle kokukhokhela usilika wokuqala. IViscose rayon nayo isetshenziselwa ukwenza i-velvet yokwenziwa, okuyindlela eshibhile kune-velvet eyenziwe ngemicu yemvelo.
Ukunwebeka kuka-Elastane ngokushesha kwenze kwaba okuthandekayo emhlabeni wonke, futhi ukuthandwa kwale ndwangu kusaqhubeka kuze kube namuhla. Itholakala ezinhlotsheni eziningi zokugqoka ukuthi cishe wonke umthengi unengxenye eyodwa yezingubo equkethe i-spandex, futhi akunakwenzeka ukuthi ukuthandwa kwale ndwangu kuzokwehla kungekudala.